महिलालाई फेसबुक म्यासेन्जरमा अश्लील फोटो र भिडिओ पठाउने व्यक्ति पक्राउ - Tech News Nepal Tech News Nepal
महिलालाई फेसबुक म्यासेन्जरमा अश्लील फोटो र भिडिओ पठाउने व्यक्ति पक्राउ
काठमाडाैं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक म्यासेन्जरकाे दुरूपयाेग गरी अश्लील तस्विर/भिडिओ पठाउने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले गत शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १७ डल्लु बस्ने २६ वर्षीय सानु पोडेलाई पक्राउ गरेकाे हाे ।
निज पाेडेले एक नाबालिकाकाे फेसबुक म्यासेन्जरमा पटक-पटक अश्लील भिडिओ पठाउने तथा पीडितको अनुहार एवं अपरिचित महिलाको नग्न शरीर जोडी तस्वीर/भिडिओ पठाई दुःख हैरानी दिनुका साथै चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेको पाइएको साइबर ब्यूराेले जनाएकाे छ ।
उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएकाे छ ।
यस्ता घटनासम्बन्धी प्राप्त निवेदन र उजुरीउपर निरन्तर अनुसन्धान भइरहेकाे समेत ब्यूराेले जनाएकाे छ । यो क्रम अहिलको बन्दाबन्दी, संक्रमणकालीन समयमा अझ बढी फैलिएकाले त्यस्ता कार्यहरु नगर्न/नगराउन ब्युरोले अनुरोध गरेको छ । साथै त्यस्ता गतिविधी गरेको पाइएमा विद्युतिय कारोवार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारबाही हुने साे सूचनामा उल्लेख छ ।
उजुरी कसरी गर्ने ?
यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री पाेस्ट गरिरहेका छन् भने तपाईंले साइबर ब्यूराेमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । अनलाइनबाटै उजुरी गर्न यस्ताे छ प्रक्रिया:
झापा । गोपनीयता भंग हुने गरी भिडिओ खिचेर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड एवं प्रसारण गर्ने तीन
ह्याकरले गरे ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी फिर्ता
काठमाडौं । हालसम्म कै ठुलो क्रिप्टोकरेन्सी ह्याकिङ घटनाकाे झन्डै आधा रकम फिर्ता भएको छ ।